Freedom Column Archives - Page3of7- Safal Stories
Home Safal's Columns Freedom Column पृष्ठ 3
नहिडे पनि अपजस आउनेछ, हिडे पनि आउनेछ काम गरे पनि आउनेछ नगरे पनि आउनेछ, त्यसो भए वास्ता किन गर्नु ? होच्याउने समाज छ जातलाई लिएर, धर्मलाई लिएर, अनुहारलाई लिएर, कर्मलाई लिएर। काम पूजा हो,...
सफल स्टोरिज प्रति म धेरै आभारी छु । प्रशंसा गर्नको लागि मसंग धेरै गहकिला शब्दहरु छैनन् , आउँदैनन् । तर मेरो जीवनमा सफल स्टोरिजका...
परिवर्तन म आफू हुनुपर्छ. तिमीले त भनिदिए भयो बुझ्नु त मैले आफूले पर्छ । न तिम्रो बाटो त्यो न मेरो 'नामको' तिमी हिंड्छौ भने मैले पनि त पाइला चाल्न...
आफैमा विश्वास गर्न सकिएन भने बाटोभरी काँडाले घोच्नेछन्, बाँच्न जनिएन भने, निसासिने बनाउनेछन्. हरिया रुख जलाएर । स्वाभिमानी भइएन भने घुंडा टेकाउने छन्. अनेकौं आश देखाएर । हिंड्न जानिएन भने लडाउनेछन्, पाइला सार्दा पाइलै पिच्छे...
म लडें, उठें र लरखराउँदै हिंडें तिमीले सोच्यौ कि म कमजोर भएँ, म हारें । तिमीले यो देखेनौ म लरखराउँदै भएपनि हिंडीराखें, म नयाँ खोजमा अलमलिदै थिएँ । तिमीले त्यसलाई...
मलाई त लडेको याद आउँछ बालक हुँदा, मलाई त हारेको याद आउँछ बालक हुँदा, मलाई त रोएको याद आउँछ जिद्दी गरेको याद आउँछ । ऊर्जा थियो, आँट थियो , बच्चा...
सक्दैनस् भन्थे अनि गर्दै जादा खुट्टा पनि तान्थे, पक्कै केहि त रहेछ ममा ! मैले नचिनेको नजानेको तर अरुले नि परिचय गराइदिएको, त्यो सहास। विश्वास थिएन तर तिम्रो मीठो बोली पछाडीको घातले दिलाएको शक्तिले आफै विश्वास गर्न बाध्य बनाइदियो। मेरो...
- दुर्गा खनाल यो पेजको माध्यमबाट मैले धेरै सफलताका कथाहरु पढ्ने मौका पाएँ । उनीहरुका सफलताका कथाहरु र अनुभवहरु पढ्ने मौका पाउँदा आभारी छु ।...
1234...77 पृष्ठ 3